Fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nampiady hevitra ary nampisara-tsaina ny maro ny fikasan’ny mpitondra ankehitriny hankalaza ny fetim-pirenena ny 14 oktobra. Nihazohazo koa ny maro tato aoriana satria toa tsy hita be ihany izay tena ho fankalazana. Izao farany izao moa dia fantatra fa any Anahidrano, tanànan’ny filohan’ny Repoblika voalohany no hankalaza izany ny mpitondra. Misy dikany ve ny safidin’ny toerana ? Te hitondra fanazavana zavatra sasantsasany ny Lakroa amin’ity matoan-dahatsoratra ity mba tsy hifangaro ny tantara.
Ny 14 oktobra 1958 aloha dia tsorina fa fanambarana ny « maha fanjakana repoblika » an’i Madagasikara, nisafidy hijanona ao amin’ny « communauté française ». Vokatry ny fitsapan-kevi-bahoaka ny 28 septembra 1958 io fanambarana io. Marihina fa teto Antananarivo ihany no nandresy ny « Tsia » tamin’io fitsapan-kevi-bahoaka ny hiaraka na tsia amin’ny « communauté » io. Ny firosoana amin’ny fahaleovantena tanteraka no notakian’izy ireo. Tsy mbola nahazo ny fahaleovantena ny Malagasy tamin’io fotoana io, satria ny 26 jona 1960 vao nambara ampahibemaso ny fahaleovan-tenam-pirenena, araka ny lalàm-panorenena repoblikanina, ny volana aprily 1959.
Repoblika sy fahaleovantena dia tsy nisaraka ary namaritra ny endrika fifamatorana amin’ny repoblika frantsay. Ilay maha ao anatin’ny « communauté » ny firenena Malagasy no namaritra na tsia ny tena endriky ny fahaleovantena. Taorian’ny fanambarana ny fahaleovantena manko dia niova endrika fotsiny ilay communauté, nanjary fivondronan’ireo tany nahazo fahaleovantena hiaraka amin’i Lafrantsa sy hamaritra fiaraha-miasa vaovao. Ilay « France-afrique » dia endrik’io fifamatorana ara-politika anaty « communauté » io, hanjary « franco-malgache » fotsiny. Manao ahoana moa izany ny fahaleovantenantsika ?
Ilay rafitra samihafa repoblikanina manana ny lalàm-panorenany, sy ny volavolan-dalàna samihafa ve namaritra fahaleovantena ho tapaka tadim-poitra ? Tsia, satria nandova fanjakana repoblikanina isika izay nisalotra ny fahefan’ny firenena manontolo, nefa nanao sorona ny fiandrianany. Nafindra fotsiny amin’ny Fanjakana malagasy izay fahefan’ny communauté. Saingy tao anaty fifanarahana, araka ny lalànan’ny Repoblika frantsay no nanaovana izany.
Io rafitra repoblikanina io ihany koa no nandrafitra ny firaisam-pirenena ara-politika : ny fifandraisan’ny hoe « repoblika sy fahaleovantena » hanjary « fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena » dia manjavozavo amin’ny olom-pirenena. Izany ihany koa no mampisavoritaka ny fitondrana repoblikanina sy ny politikany. Izany savoritaka ara-politika sy ara-pitondrana izany ambara ho politika avo lenta eo amin’ny firenena. Manjary tsilalao politika ho an’ny mpitondra ny fampifangarongaroana ny resaka samihafa. Izao anefa no mazava, ny fampandrosoana ny faritra sy ny fitsinjaram-pahefana no voaviraviran’ny politika (province, région, décentralisation, fédéralisme, gouverneurs, chefs des régions…). Ny zanaky ny faritra mahazo fitondrana no manao sorona ny fampandrosoana ny tanindrazany. Izy ireo no mampifangaro ny mpitondra sy ny fahaleovantena ary ny fiandrianam-pirenena.
Ny fiakarantsika amin’ny fahaleovantena dia namaritra endri-pifanarahana amin’ny Fanjakana frantsay, saingy ny volavolan-dalàna samihafa namaritra ny maha izy azy ny firenena sy ny maha olom-pirenena dia nalaina tahaka tamin’ny lalàna sy ny Repoblika frantsay.
Io lovan’ny repoblika mampanjavozavo ny fiandrianam-pirenena io no tadim-poitra mila ho tinapaka raha tiana hazava ny fahaleovantena. Ny repoblika manko tsy firenena, ary ny fahaleovantena mitaky fitiavan-tanindrazana. Ny olom-pirenena mahatsapa ny fitiavan-tanindrazana no manompo an-kitsim-po ny firenena ary afaka manorina firenena vanona. Rehefa afangaron’ny vahoaka amin’ny mpitondra repoblikanina ny fiandrianam-pirenena, dia lasa andevon’ny mpitondra izy ; ary olona miandry ho tolorana fa tsy manana ny fahafahana nentin’ny fahaleovantenam-pirenena. Mbola eo ny dingana misy ny vahoaka ankehitriny.